नेपाल फाइनान्सको १२५% हकप्रदमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने
२०७७ मंसिर, ४
मंसिर ४, काठमाडौं । नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले १२५ प्रतिशत हकप्रद शेयर आज (बिहीवार)देखि विक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले १ बराबर १ दशमलव २५ को अनुपातमा रू. १६ करोड ९७ लाख ५० हजार ६२५ बराबरको १६ लाख ९७ हजार ५०६ दशमलव २५ कित्ता हकप्रद शेयर विक्री खुला गरेको हो ।
मंसिर २४ गतेसम्म विक्रीमा रहने यो हकप्रद शेयरमा कात्तिक ५ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले हकप्रद शेयर प्रयोजनका लागि कात्तिक ६ गते एक दिन बुक क्लोज गरेको थियो ।
यो हकप्रद शेयर विक्री गर्न कम्पनीले असोज १९ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको हो । हकप्रद शेयर विक्री गर्न भने कम्पनीले गत फागुन २९ गते बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।
यस हकप्रदलाई इक्रा नेपालले इक्राएनपी आईपीओ ग्रेड ५ रेटिङ प्रदान गरेको छ । ग्रेड ५ ले कम्पनीको आधारहरु कमजोर रहेको संकेत गर्दछ । हाल यस कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १३ करोड ५८ लाख १ हजार रहेको छ । हकप्रद पश्चात यो पूँजी रू. ३० करोड ५५ लाख ५१ हजार पुग्नेछ ।
हकप्रद विक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै नेपाल फाइनान्सको केन्द्रिय कार्यालय तथा अन्य शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो शेयर सफ्टवेयर मार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
चार महीनामा चितवनमा ६५६ ओटा नयाँ उद्योग दर्ता, सबैभन्दा बढी कृषिका[२०७७ मंसिर, ८]
राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन[२०७७ मंसिर, ८]
पहिलो त्रैमासमा राधी विद्युत कम्पनीको नाफा २ करोड ५७ लाखभन्दा बढी [२०७७ मंसिर, ८]
हकप्रद शेयर निष्कासन गरिरहेको नेपाल फाइनान्सको नोक्सानी बढ्यो[२०७७ मंसिर, ८]
नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको शेयर कारोबार फुकुवा र बोनस शेयर सूचीकृत[२०७७ मंसिर, ८]
शेयर बजारमा सामान्य करेक्सन, कारोबार रकम ५ अर्ब नजिक [२०७७ मंसिर, ८]
एनआईसी एशिया बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन मंगलवार[२०७७ मंसिर, ८]